१७:४०, ३१ अगस्ट २०२० जस्तै गरी पुनरावलोकन
६ बाइटहरू हटाइयाे , ५ महिना पहिले
२२:३२, २४ अगस्ट २०२० जस्तै गरी पुनरावलोकन (सम्पादन गर्ने)
१७:४०, ३१ अगस्ट २०२० जस्तै गरी पुनरावलोकन (सम्पादन गर्ने) (रद्द गर्ने)
[[चित्र:Pfeffer-Gewürz.jpg|right|thumb|300px|'मरिच'का काला तथा सेता दानाहरू]]
वनस्पति जगत्‌मा [[पिप्पली कुल]] (Piperaceae)को मरिचपिप्पली (Piper nigrum) नामक लता सदृश बाह्रैमासे बिरुवाहरूको आधापाकेका वा बढी सुकेका फलहरूको नाम '''मरिच''' (Pepper) हो। पाकेका सुकेका फलहरूका बोक्राहरू बाटबोक्राहरूबाट सेतो गोला मरिच बनाइन्छ जसको व्यास लगभग ५ मिमी हुन्छ। यो [[मसाला]]को रूपमा प्रयुक्त हुन्छ।
मरिच का बिरुवाहरूको मूल स्थान दक्षिण भारत मानिन्छ। भारत बाहिर इन्डोनेशिया, बोर्नियो, इन्डोचीन, मलेशिया, श्रीलङ्का र स्याम इत्यादि देशहरूमा पनि यसको खेती गरिन्छ। विश्वप्रसिद्ध भारतीय गरम मसलाहरूमा, ऐतिहासिक र आर्थिक दुवै दृष्टिहरू ले, मरिचको धेरै नै महत्त्वपूर्ण स्थान छ। आयुर्वेदिक ग्रन्थहरूमा यसको वर्णन र उपयोग प्राचीन काल देखिनै चलि आइरहेको छ। ग्रीस, रोम, पोर्चुगल इत्यादि संसारको विभिन्न देशहरूमा सहस्रौं वर्ष पुराना इतिहासमा पनि यसको वर्णन भेटिन्छ। १५औं शताब्दीमा [[भास्को-डि-गामा]] द्वारा समुद्रमार्ग देखि भारतको सुप्रसिद्ध मलाबारको तटवर्ती इलाकाको खोजको मुख्य कारणमा पनि मरिचको व्यापारको आर्थिक महत्त्व नै थियो।
मरिचको बिरुवा [[त्रावणकोर]] र [[मालाबार]]को जंगलहरूमा बहुलता बाटबहुलताबाट उत्पन्न हुन्छ। यसको अतिरिक्त त्रावणकोर, कोचीन, मलाबार, मैसूर, कुर्ग, महाराष्ट्र तथा असमको सिलहट र खासीको पहाडी इलाकाहरूमा बहुतांशमा पनि उमारिन्छ। दक्षिण भारत का धेरै जसो भागहरूमा यसको खेती घर-घरै गरिन्छ। वास्तवमा मरिचको भारतीय क्षेत्रको विस्तार उत्तर मलाबार र कोंकण देखि लिएर दक्षिणमा त्रावणकोर कोचीन सम्म सम्झिनु पर्छ।
आज मरिच अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको एक महत्त्वपूर्ण पदार्थ हो। संसारको कुल देशहरूमा मरिचको उत्पादन [[द्वितीय महायुद्ध|गत महायुद्ध]]को पूर्वको ९६,५२५ मेट्रिक टन बाटटनबाट घटेर लगभग ४५,७२५ मेट्रिक टन पुगेको थियो। यति धेरै कमीको मुख्य कारण गत महायुद्धमा इन्डोनेशियाको मरिचको खेतीको सर्वनाश नै बुझनु पर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा मात्र भारतको उत्पादन नै महायुद्धको पूर्वको १८,८०० मेट्रिक टन देखि बढेर २५,४०० मेट्रिक टन भन्दा माथि पुगेको छ।
मरिचको बिरुवा हरिया वृक्षहरू र दीमक बाटदीमकबाट बचेर रहने अन्य आश्रयहरूमा झारको तरिकाले चढेर खूब फैलन्छ। यसका झाङ स्थूल एवं पुष्ट, कांडग्रन्थिहरू स्थूल केही कहिले-काँही मूलयुक्त तथा पातहरू चिप्ला, लंबाग्र, संवृत, अंडाकार तथा १०-१८ सें.मी. लामा र ५-१२ सें.मी. चौडा हुन्छन्। यो बाह्रैमासे बिरुवा साधारणतया २५-३० वर्ष सम्म फल्ने एवं फूल्ने पनि गर्दछ, कहीं कहीं त ६० वर्ष भन्दा पनि धेरै समय सम्म फलिएको देखिएको छ। यो बिरुवा समुद्रतट भन्दा १,०७० मीटरको ऊँचाई सम्म हुन्छ। यसले वर्षा द्वारा नै पानी पाउँछ। स्वभावत: यो बिरुवा चिस्यान प्रधान र २,०३२ मिलीमीटर भन्दा अधिक वार्षिक वर्षा तथा १०रू सें. देखि ४०रू सें. सम्मको तापवाला इलाकहरूमा नै फैलन सक्छ। बिरुवाहरूको विस्तारको लागि यिनको कलमि काटेर रोपिन्छ। अग्ला रुखहरूको आश्रयले मरिचको बिरुवाहरू ३० देखि ४५ मीटर सम्म अग्लो चढ्छन् तर फलहरू लाई सुगमतापूर्वक उतारनेको लागि यिनलाई साधारण तथा ६-९ मीटर सम्म नै बढ्न दिइन्छ।
मरिचको गहिरो हरीयो रंग का घना बिरुवाहरूमा जुलाईको बीचमा स-साना सेता अलि हल्का पहेंलो रंगको फूल उम्रिन थाल्छन् र त्यसपछिको जनवरी देखि मार्चको बीच यिनका नारंगी रंगको फल पाकेर तैयार हुन्छन्। फल गोला हुनछन् र यसको व्यासमा ३-६ मि.मी. हुन्छ। साधारणतया तेश्रो वर्ष पश्चात्‌ बिरुवाहरू फल्न थाल्छ। सात वर्ष पछि बिरुवाहरूमा फलहरूको १०० देखि १५० मिलीमीटर लामो गुच्छा अधिकतम मात्रामा लाग्न प्रारम्भ हुन्छ। गर्मीमा प्रत्येक बिरुवाहरू बाटबिरुवाहरूबाट साधारणतया ४ देखि ६ किलोग्राम सम्म मरिच प्राप्त हुन्छ। यसको प्रत्येक गुच्छामा ५०-६० दाना हुन्छन। पाकेपछि ति फलहरू का गुच्छहरूलाई उतारेर जमीनमा अथवा चटाएरमा फैलाएर हाथले रगडेर मरिचका दानाहरूलाई अलग गरिन्छ। यिनलाई ५-६ दिनहरू सम्म घाममा सूक्न दिइन्छ। राम्रो सँग सुकेपछि मरिचका दुवै बोक्राहरू खुम्चिने तथा चाउरि पर्ने हुन थाल्छ र यिनीहरूका रंग गाढा कालो हुन थाल्छ। इन्डोनेशिया, स्याम आदि देशहरूमा पूर्णतया पाकेका फलहरू लाई उतारेर पानीमा भिजाएपछि, बोक्राहरू लाई बिलगाएर, सेता मरिचको रूपमा तैयार गरिन्छ। सेता मरिच पिरो र तीतोपनमा कालो मरिच भन्दा कम प्रभावशाली हुन्छ। तर स्वाद अधिक रुचिकर हुन्छ। भारत बाटभारतबाट प्रतिवर्ष लगभग २० करोड रूपैयाको लागतको मरिच विदेशहरू पठाइन्छ। यस निर्यातमा अमरीकी डलरहरूको भाग लगभग ६४ प्रतिशत भन्दा बढी हुन्छ।
"https://ne.wikipedia.org/wiki/विशेष:MobileDiff/891237" बाट अनुप्रेषित